Uvavanyo lweHTC Sensation (III) | I-Androidsis
el_uliulius | | nokuVavanyelwa, Reviews, Tutorials
Inxalenye yesithathu neyokugqibela kolu hlaziyo lwesiphelo seenkwenkwezi seHTC. Kule nxalenye siza kuthetha ngayo yintoni enokwenziwa ngetheminali Isiphelo esiphakamileyo esivela kwi-HTC, ukuya kuthi ga ngoku kwaye singonwabela ngamandla e-Hardware.
Into yokuqala yokuqaqambisa kunye nenqaku elilunge kakhulu, iHTC Sense. Inguqulelo 3.0 yedesktop ye-HTC iphantsi. Inyaniso indishiyile ndinencasa emnandi kakhulu emlonyeni wam. Inyani yile yokuba enkosi kubapheki ndibenethuba lokuzama 'iimpawu' ezithile kuMnqweno wam, kodwa abananto yakwenza nohlobo lwe-3.0. Inkqubo ye- Iziphumo banjalo ufeze kakhulu, las oopopayi ococekileyo kakhuluUkuba uyayonwabela iwijethi, ngokuqinisekileyo kuya kubakho enye yesicelo sakho kwaye oopopayi oopopayi ngokuhamba kwexesha, zichanekile kakhulu.
Elinye icandelo elindichukumisileyo yi Isinxibelelanisi sesiphelo semultimedia. Yibane Isidlali somculo esihle kakhulu kwaye ndimamela iiyure kunye neeyure zomculo ngaphakathi nangaphandle kwekhaya, ndibone ukuba ngumgangatho ophezulu wale fowuni. Iifoto azithathayo zilungile kakhulu. Ikhamera ye-8MPx isebenza kakuhle kulo naluphi na uhlobo lokukhanya. Abafikeleli kumgangatho wekhamera ye-reflex kodwa bafikelela kwiitheminali ezininzi eziphezulu. Ukurekhoda kwi-HD epheleleyo kwi-1080p kushiya uchukumisekile. Ukongeza kumgangatho, ine-fps ephezulu, ingalahleki isantya okanye ibonakalise naluphi na uhlobo lwe-lag kwimiboniso ehamba kakhulu.
Ngokubhekisele kumandla, akukho nto unokuyithetha. I-HTC Sense sele inzima kakhulu ukuhamba, kodwa i-terminal ayiyiqapheli. Iyakwazi ukuhambisa imidlalo ye-HD njenge-Asphalt 6 HD, endikhe ndazivavanya, kwaye inyani yile umgangatho wemizobo kunye speed bandishiyile ndonelisekile. Ukuba uthanda ukudlala kude nekhaya nangaliphi na ixesha onalo, esi siginali siya kukuvumela ukuba uhambise imidlalo yeGameloft HD okanye naluphi na uhlobo lomdlalo onemizobo engaphezulu okanye engaphantsi, ngaphandle kwengxaki. Zonke iimvavanyo ze Quadrant bandinika Umlinganiso ka-2000/2100 malunga.
Ngokwendlela yokusebenza, njengefowuni yile nto iyiyo, akukho ngxaki. Ewe ewe, qhubeka nokubonisa Ingxaki yokugubungela i-WiFi batsala zonke iimodeli ezintsha ze-HTC. Zombini i-Desire S kunye ne-Wildfire S, kunye ne-Sensation endithetha ngayo, baphulukana ne-WiFi ukuba babanjwe phezulu, ekuphakameni kwekhamera esemva. Le ayisiyongxaki xa usebenza nesiphelo ngokuthe nkqo, kodwa xa ibekwe tye, ukuba ukogquma kwakho kuwela ngaphantsi kwe-50%, ungaphulukana nesiginali kwindawo yoxhumo. Zuza okuninzi ngokwe-3G okanye nge-2G. Ndiye ndafumana ingxelo naye kumanqaku endlu yam apho ezinye iifowuni zingenayo. Ingxaki encinci endiyifumeneyo yile Isaziso se-LED, xa utshaja, soze ujike uluhlaza, ihlala iorenji. Ke uyakholelwa ukuba ayigqibanga kulayishwa, eneneni enakho. Ngokuqhawula uqhagamshelo kwitshaja kwakhona, sele ijika ibe luhlaza.
Ngokuphathelele 4.3 intshi screen, Akukho nto imbi ukuyithetha ngaye, ngokuchaseneyo, onke ngamagama alungileyo. Kude nekhaya unako funda ngokugqibeleleyo kuyo, nokuba kukhanya kangakanani kuyo. Isantya kunye nemibala iyachukumisa. Ibe Impendulo entle kakhulu zombini kwizicelo nakwimidlalo. Isebenza ngaphandle akukho ngxaki kwi-multitouchNokuba yeyiphi na isicelo osebenza kuso, kwaye ngaphezulu kwako konke, usetyenziso apho ubhala khona.
Okokugqibela thetha ngebhetri. Ndithathela ingqalelo into yokuba Isiphelo senziwe kakuhle. Amandla eprosesa, i-RAM eyaneleyo (786Mb) kunye neROM (1GB). Ndicinga ukuba ayizukuncipha kulo naluphi na uhlobo lwecandelo ngokwehardware, kuba ilungelelene. Mhlawumbi ibhetri iphantsi, ndiyaphinda, mhlawumbi. Ukuba usebenzisa ifowuni njengoko injalo, ifowuni ene-Intanethi, awuyi kuba neengxaki zokuzimela. Ibamba kakuhle kakhulu ukuba isetyenziselwa ukukhangela, jonga amaphepha ewebhu ... Kodwa, nje ukuba uqale ufune ukubethelwa, ngokufanelekileyo ibhetri iya kusokola. Ukuyisebenzisa njengefowuni, awuyi kuba nengxaki yokuchitha usuku lonke nayo, oko kukuthi, malunga ne-12-16h. Kodwa ukuba uqala ukudlala, ndiyathandabuza ukuba uya kuba nakho ukuchitha iiyure ezingama-6 zobomi bebhetri, ukuba ayingu-2. Kwi-2h ye-Aspahlt 6 inokusebenzisa i-50% yebhetri cwaka. Ke andiyithathi into yokuba ibhetri embi.
Ungayicebisa le fowuni kubantu endibaziyo? Ewe, ewe, ewe. Ndingayibeka phambi kwetheminali njenge-LG Optimus 2x kunye (noko ndikubonile apha ngasentla) i-Samsung Galaxy SII. Zonke ezi zi-3 zinamandla amakhulu, kodwa kuphela le ine-HTC Sense 3.0 ethi ngokungathandabuzekiyo iyenze iphumelele amanqaku amaninzi.
Ndikushiya ezinye iividiyo zokusebenza kwesiphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Uvavanyo lweHTC Sensation (III)
lukhulu uphononongo !!! Ndiyayithanda le fowuni, ekuphela kwento embi endiyibonayo kukuba kwincasa yam engu-4,3 ″ yescreen kubonakala kum ngathi buburharha, kodwa yile nto ithathwa yi-XD ngoku ukubona xa uphawula ukudibana okunzulu phakathi kwemvakalelo kunye nomnyele we-II.
Izolo ebusuku ndifumene i-imeyile evela kuVodafone kunye nemvakalelo yeHTC yeSpain ngoku.
into embi lixabiso ama-349 eeyuro kunye namanqaku angama-600.
Masibone ukuba banokufumana ezinye iindlela ...
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba iyakuphuma iorenji kwiinyanga ezimbalwa?
Yifowuni endifuna ukuyithatha kodwa hayi i-349 Euro.
Ndinoluvo oluhambelana namaza eebhendi othungelwano lwakho, ngelishwa hayi nalawo elizwe lam… ithatha kuphela i-2g… le intsha enemica esesesikrinini ingakubiza i-pesos ezingama-5500 zaseMexico….
Sele ndinayo, kwaye iyamangalisa, iyakhawuleza ukukhuphela idatha, isikrini asiyonto yamkelwe, kodwa akukho nto inokuthelekiswa ne-amoled, siza kwenza ntoni, ubungakanani bayo yonke into ayibobukhulu I-Samsung Galaxy SII imbi ngakumbi kuba isikwere ngakumbi; Isiphene ekuphela kwento endiyibonileyo kukuba sele ixhonyiwe kum kube kanye kwaye ayisiyonto ipholileyo, umnqweno awuzange uxhomeke nakunyaka omnye endinayo kwaye le ngeveki sele ihamba nge-1.mmmm mmmm .... kodwa okunye, ndiyakucebisa
Molo, ngethemba lokuba undincede, ndinothumelo lwe-htc kwaye andinakho ukuyisebenzisa ngokuthe tye ekubhaleni kwingxoxo ...